I-Durban Car Terminal iphule irekhodi layo lonyaka ngokuphatha izimoto eseziqediwe ukwakhiwa ezingu-531 755 esikhathini esiyizinyanga eziwu-12 esiphele ngoMashi. Umkhiqizo oxubile wenze izibalo zezimoto ezingeniswe ezweni zibe wu-53% ezibalweni zonke okufaka kakhulu izimoto ezincane. Kube ngu-34% ezibalweni zonke kusuka ngonyaka odlule. Kusuka ngoSepthemba iDurban Car Terminal izophatha izimoto zakwaFord iRanger. Nezinhlobo ezihlukene zeChery neJAC zizokwenza ukuthi kunyuke umthamo wezimoto. - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News